Makumi mazana mana nemakumi mashanu Akatemwa nevanyori Vasingazivikanwe ve400
403 makotesheni uye kutaura
Dzimwe nguva, tinonzwa tichiderera kuti tinobvuma kutadza zvakanyanya isu tisati tatadza kunyatso. Mumamiriro ezvinhu akadaro, zvakakosha kuti isu ramba tichikurudzirwa uye edza kukurira kuoma kwese neuipi hwedu guts.
Hapana chinhu muhupenyu hachigone. Izvo zvese ndezve kutya kwekuvanzika mukati medu. Iyoyo nguva yatinotanga kuzvitenda isu pachedu uye nekutenda mune zvatinokwanisa, tine chokwadi chekuita zvinhu uye kuramba tichikunda.
Hupenyu hahusati hwave mubhedha wemaruva uye nguva dzakaoma vane chokwadi chekuyambuka mafambiro edu, asi zviri patiri nezvekuti isu tinotora sei mamiriro iwayo uye toedza kuakunda.
Hatifanire kubvuma kukundikana nemukana chero upi zvawo. Asi tinofanirwa kuchengeta kutenda mune kugona kwedu uye kusambonzwa kunyara kuyedza nguva inotevera kunyangwe kana takundikana mukuedza kwekupedzisira.
Kukundikana kunouya kwatiri isu nguva yatinomira kuyedza. The moment kusvika kana isu takazvimiririra mune zvatinoita, isu tinoramba tichidzidza nguva yega kana takatadza, asi nguva yatinoramba kumira, iko iko kutadza chaiko kwatinosangana nako.
Mumamiriro ezvinhu akadaro, mazwi chete ekurudziro anogona kutitamisa kufamba anobva kune akati wandei vanyori vasingazivikanwe vanotibatsira kuziva chokwadi chemuedzo.
Zvimwewo Quotes nekusazivikanwa inotiudza kuti tinofanirwa kugara tichimanikidza zviito uye kuedza kuzadzisa zvinangwa zvatakagadzirirwa isu. Izvo zvakakosha kuti tinzwisise kuti zvese zviroto zvedu zvine chokwadi chekuenda pasina kana tisiri kumusoro kuti tibude uye kuedza kuzadzisa ivo.
Hapana anozokuitira chero chinhu. Saka, hapana mumwe kunze kwako iwe waizadzisa zvinangwa zvako. Zvakare, iwe unofanirwa kumisikidza kuita chiito nekukurumidza.
Iko hakuna chinonzi 'gare gare' sezvo kazhinji chichiita 'kamwe'. Kana iwe uine chero basa rekugadzirisa, iwe unofanirwa kutanga wakuita izvozvi, sezvo pasina mangwana yekubata navo.
Dzidza kuti panogona kunge pasina mudzidzisi mukuru kune hupenyu pachako Haufanire kumbomira kudzidza sezvo hupenyu huchagara uchikuisa muhurongwa hwekuongorora, uye zviri kwauri kuti wakabata sei zvidzidzo izvozvo.
Zvakare, iwe unofanirwa kudzidza kutarisa pane zvinangwa zvako pane izvo zvipingamupinyi zvinouya nenzira yako. Kana iwe ukaramba uchitarisa pazvipingamupinyi, iwe une chokwadi chekubva pane zvaunotarisa.
Nekudaro, ramba uchitarisa kune chinangwa icho iwe chawakazvimiririra pachako, uye budiriro inofanirwa kuuya kwauri!
Tenda kuti hapana chinokona. - Hazvizivikanwe
Tenda kuti hapana chinokona muhupenyu. Ehe, vanhu vakabudirira nhasi vasvika ku…
Iwe unongokundikana iwe paunomira kuedza. - Hazvizivikanwe
Dzimwe nguva, tinozvitora setakundikana uye tinotanga kufunga sekunge isu takanakira…
Push pachako, nekuti hapana mumwe munhu achakuitira iwe. - Hazvizivikanwe
Isu tinoziva kuti kusungwa pamoyo chinhu chakanaka. Hapana chinogona kuve nani pane kubatirira nemunhu…
Dzimwe nguva gare gare inova isingamboiti. Zviite izvozvi. - Hazvizivikanwe
Kazhinji yenguva, tinofungidzira kuti tine yakawanda nguva. Uye nekuda kwechikonzero ichocho, isu…
Chinokosha pakubudirira kutarisa pazvinangwa, kwete zvipingamupinyi. - Hazvizivikanwe
Dzimwe nguva, kana isu tichiedza kuzadzisa zvinangwa zvedu, tinofanirwa kupfuura nenyaya zhinji. Uye…
Mufaro uri mumoyo, kwete mumamiriro ezvinhu. - Hazvizivikanwe
Vanhu vazhinji kazhinji vanonzwa kuti vamwe vanofara kupfuura zvavari. Pese pavanodongorera pasocial media yavo…
Usarega zvinhu zvakapusa zvichiputsa mufaro wako. - Hazvizivikanwe
Muhupenyu, hazvisi zvese zvinofanirwa kufamba senzira yaunoda. Kuchava nezvimwe zvinhu…
Usambofa wakagadzirisa zvishoma pane zvaunokodzera. - Hazvizivikanwe
Taura nezve basa kana hukama, haufanire kumbogadzirisa chero chinhu chakakosha kudarika icho iwe…
Iva akanaka kune vanhu pasina chikonzero. - Hazvizivikanwe
Ita zvakanaka kune vanhu pasina chikonzero, nekuti ndizvo zvaunoratidzira sehunhu hwako. Unofanira kugara…
Usarase tariro. Hauzive zvichauya mangwana. - Hazvizivikanwe
Usambofa wakarasa tariro iwe hauzive kuti ramangwana rakakugadzirira sei mubhokisi rayo. Kana chimwe chinhu…
Zviratidze pachako, kwete vamwe. - Hazvizivikanwe
Zvinhu zvikuru hazvina kubvira zvabva kunzvimbo dzekunyaradza. - Hazvizivikanwe
Tinoziva kuti kunyaradzwa ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvehupenyu hwedu. Kana usiri…
Iva nemufaro, kwete nekuti zvese zvakanaka, asi nekuti iwe unogona kuona zvakanaka mune zvese. - Hazvizivikanwe
Iva nemufaro nepfungwa yekuti iwe unogona kugadzira zvinhu zvakakukomberedza. Izvo zvese ndezve…
Zvichava zvakaoma, asi zvakaoma hazvireve kuti hazvigoneke. - Hazvizivikanwe
Zvakanaka, isu tese tiri kurarama nechiroto muhupenyu hwedu. Tese tine zviroto zvakasiyana…
Shamwari dzechokwadi ishamwari yeupenyu. - Hazvizivikanwe
Shamwari. Chipo chikurusa icho munhu anogona kuve nacho munguva yehupenyu hwake. Simba rekuve…
Rudo rwechokwadi haruwanikwi. Yakavakwa. - Hazvizivikanwe
Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti rudo rwechokwadi haruwanikwe. Icho chinhu chaunofanira kuvaka…
Rudo harudi kuve rwakakwana. Izvo zvinongoda kuve zvechokwadi. - Hazvizivikanwe
Rudo harudi kuva rwakakwana; zvinongoda kuve zvechokwadi. Hongu, zvinotaurwa nenzira kwayo se…
Zvikomberedze nevanhu vakanaka. - Hazvizivikanwe
Zvakakosha kuzvikomberedza nevanhu vakanaka nekuti izvo zvinozopedzisira zvakubatsira iwe kufunga zvakanaka.…
Kufunga kwakanaka hakusi kufuratira matambudziko ako. Kuva nechivimbo mukukwanisa kwako kubata navo. - Hazvizivikanwe
Kufunga kwakanaka hakusi kufuratira matambudziko ako, asi kuri kwekubata chivimbo chako ne…
Zvirote. Zvitende. Zvivake. - Hazvizivikanwe
Semunhu, chinhu chekutanga chaunofanirwa kubvuma ndechekuti kurota kwako hakuna kuvharirwa…
Kana hupenyu hukaoma, zvipinze iwe kuti uve nesimba. - Hazvizivikanwe
Hupenyu hwese hwekupfuura zvipingaidzo zuva rega rega. Zvipingamupinyi izvi hazvisi zvimwe kunze kwezvipingamupinyi nematambudziko…
Chiri kukurwadza nhasi chinoita kuti usimbe mangwana. - Hazvizivikanwe
Iwe haugone kudzidza chimwe chinhu nekugara mukati medu nyaradzo nzvimbo. Unogona kudzidza chete kana uri…